Dzikama uye ita girini
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kutarisirwa » Dzikama uye ita girini
Nhau Nhau • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Hospitality Industry • Monaco Kupwanya Nhau • Dhinda Zviziviso • Kutarisirwa • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Trending Now
Iyo Monte-Carlo Bay Hotel & Resort, iri pamuganhu weLarvotto Marine Reserve muPrincity yeMonaco, yakazvipira mukusimudzira kwakasimba. Iyo hotera yegirini yakasvibira timu, 'Ramba Wakadzikama uye Act Green' inopfupisa nzira yayo yekushinga kuchengetedza kona yavo yakanaka yeMediterranean.
Kubva muna Gumiguru 2013, Monte-Carlo Bay Hotel & Resort yakapa chimiro nehunhu kune yayo giraidhi yekusimudzira. Dare revanozvipira, rakanzi Bay Be Green Team rakagadzwa panguva iyoyo kuunza pamwe chete gumi nemashanu nhengo dzemahotera dzinosangana vhiki nevhiki kuti dzimise uye dzinoongorora zviitiko zvekuchengetedza.
Iyo Bay Be Green Chikwata inoshandisa iyo Green Globe Standard ye Sustainable Tourism kutungamira kwavo, zvichikonzera Monte-Carlo Bay Hotel & Resort zvakare kupihwa Green Globe chitupa.
Ihotera iyi yakasimbiswa gore rega rega kubva Kubvumbi 2014 nekuda kwezvavakaita munharaunda nemagariro. Vashandi vanoshanda mukudzokorodza zvinhu zvakasiyana siyana zvinosanganisira macartridge emadhindauta, mabhatiri, bepa, mabhodhoro epurasitiki, magaba uye nezvimwe. Mapepa epurasitiki anotumirwa kusangano re "Les Bouchons d'amour" rekushandisazve kubatsira vakaremara.
Kushingairira kwevashandi kunogovaniswa nevashanyi vachishandisa Shiro Alga Carta; chikwangwani chakagadzirwa kubva pabepa regungwa muchimiro chegungwa diki rakasvibirira, rinoiswa mukamuri yega yega. Vashanyi vanokurudzirwa kupatsanura marara senge mapepa nemabhatiri, uye vanobatsira kudzikisa kushandiswa kwesimba. Kuti iwedzere kurwisa kwayo shanduko yemamiriro ekunze, hotera inongoshandisa 100% magetsi emagetsi uye inoshandisa mota dzakachena senge magetsi emagetsi uye mota dzeTwizzy.
Monte-Carlo Bay Hotel & Resort zvakare inopa zvipo zvakakosha kunharaunda dzayo. Iwo mahotera anoshanda pamwe neAMAPEI, vachipa basa kune vakaremara vakuru vanoshanda pazvinhu zvakakosha sekunyora mapakeji. Mamwe masangano emuno anowana rubatsiro, kusanganisira, Les Bouchons d'Amour, Les Anges Gardiens de Monaco, SIVOM - Hapana Kisimusi isina Zvipo, Pacôme - Zvipfeko Kuunganidza & Kudzokorora, Scouts dzeMonaco, SOLIDARPOLE, France Cancer uye Iyo Foundation yaPrince Albert II.
MONACOLOGY isvondo regore rino rekuziva rakakumikidzwa kusimudzira kuziva kwezvakatipoteredza mukati mehukuru hweMonaco. Munguva yemutambo uyu gore rapfuura, vana zana nemashanu vane makore matanhatu kusvika gumi nemaviri vakanakidzwa nezvirongwa zvakarongedzwa nenhengo dzeBay Be Green Team vachidzidzisa pfungwa dzekuchengetedza. Iyo Bay Be Green Chikwata inozvirumbidza pamusoro pezviitiko zvedzidzo uye kusvika parinhasi vanopfuura mazana maviri nevashandi vemuhotera vakadzidziswawo pamisoro yekusimudzira misoro.